Tuesday March 17, 2020 - 16:34:34 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanaya deegaannada dhanka galbeed uga beegan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa sheegaya in halkaas qarax xooggan lagula beegsaday ciidamo katirsan dowladda Federaalka.
Jugta qarax xooggan ayaa maanta duhurkii laga maqlay deegaanka Ceelasha Biyaha ee udhaxeeya Muqdisho iyo Afgooye, ilo wareedyo ayaa sheegaya in qarax miino uu haleelay gaari Cabdi Bile ah oo ay la socdeen maleeshiyaadka Danab ee lagu tababaray saldhigga ciidanka Mareykanka ee Balidoogle.
Goob joogayaal ayaa warbaahinta u sheegay in qaraxu uu sababay burbur xooggan oo gaaray gaari ka yimid dhanka Afgooye kunasii jeeday Muqdisho, dhinaca kale wararka ka imaanaya gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in qaraxa lala beegsaday kolonyo ciidamo Kenyaan ah.
Sida wararku sheegayaan gaari ay wateen ciidamada gummeysiga Kenya ayaa hertiyay miino dhulka lagu aasay wuxuuna qaraxaas sababay in gabi ahaanba uu gubto gaariga qaraxu beegsaday.
Ciidamada laweeraray ayaa ka amba baxay degmada Dhoobleey waxayna kusii jeedeen deegaanka xuduud beenaadka dhaca ee Dhoobleey.
Wararka ayaa intaas ku daraya in ay dhimasho iyo dhaawac noqdeen dhammaan ciidamadii Kenyaatiga ahaa ee la socday gaariga qaraxu beegsaday, ciidamada Kenya ayaa weeraro kala kulmay Al Shabaab marka ay saadka isugu gudbinayaan saldhigyada ay ku leeyihiin Jubbada Hoose.